Jumpsuit လှလှလေးတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေနဲ့ ဝတ်ကြမလဲ? - For her Myanmar
လန်းသထက် လန်းချင်သူတွေအတွက် …
တစ်ကြော့ပြန် ဖက်ရှင်တွေထဲမှာ ပျိုမေတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖက်ရှင်တစ်ခုကတော့ Jumpsuit လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ကျီနဲ့ ဘောင်းဘီတစ်ဆက်တည်းပါတဲ့ ဝတ်စုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးတွေက အပေါ်နဲ့အောက် တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဆိုတော့ ဘာနဲ့ ဘယ်လို လိုက်ဖက်အောင် ဝတ်ရမလဲလို့ စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့… ကိုယ်ဝတ်ချင်တဲ့အချိန်ကောက်ဝတ်လို့ရတာဆိုတော့ အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးလေ။ အားနည်းချက်ကတော့ တစ်ခုပဲ။ အိမ်သာတက်တဲ့အခါ အကုန်ချွတ်ချရတာလေး တစ်ပေါက်ရှိ -_-
အက်ဒ်မင်က ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးထွက် Jumpsuit လှလှလေးတွေကို ယောင်းတို့အတွက်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုလေးဝတ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာပါ ဖော်ပြပေးမှာမို့ ယောင်းတို့ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ ခေါင်းမစားတော့ဘူးပေါ့…
ဒီလို Jumpsuit လေးကတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ စမတ်ကျတဲ့ ပုံပေါ်စေပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ အစည်းအဝေးတွေမှာ ဝတ်တာ ပိုအဆင်ပြေလောက်မှာပါ။ တစ်ဘက်သားကလည်း ကိုယ့်ကို လေးစားစေလောက်မယ့် အမြင်ဖြစ်စေပြီး ကိုယ့်အတွက်လည်း သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်လေ.. ခေါင်းလည်း မစားတော့ဘူးပေါ့..
ပုခုံးသားဖော်ထားပြီး ခေါင်းလောင်းဘောင်းဘီပုံစံနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ ဒီဝတ်စုံလေးဆိုရင်တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လွင့်လို့ရပါတယ်။ နွေရာသီအတွက် အံကိုက်ပေါ့.. အရောင်နုနုလေးဆိုတော့ စိတ်ကလည်း အရမ်းကို လွတ်လပ်နေမှာလေ.. စိတ်ပျိုကိုယ်နုတာပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
ဒီ Jumpsuit လေးကတော့ ဂါဝန်ပုံစံလေးမို့အိနြေ္ဒရရလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေ ပိုကောင်းစေမှာပါကွယ်… Crush နဲ့သွားတွေ့မှာတို့၊ ချစ်ချစ်နဲ့ တူတူသွားစရာရှိတာတို့ဆို ဒါမျိုးလေးနဲ့ ကွက်တိပဲလေ.. အမြင်လည်း တင့်၊ ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိ.. ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ <3
Related Article >>> နေ့စဉ် ရုံးတက်ဖက်ရှင်အတွက် ခေါင်းစားနေရတဲ့ယောင်းတို့ အတွက်
ဒီလို ပခုံးသားအကျမှာ အဖတ်ဝဲဝဲလေးပါတဲ့ ဒီဇိုင်းကတော့ တစ်ကြော့ပြန်ဖက်ရှင်တစ်မျိုးပါပဲ။ ပါတီတွေ နိုက်အောက်တွေအတွက်တော့ ရှယ်မိုက်မယ့် ဒီဇိုင်းလေးပေါ့.. ယောင်းတို့ရော ဘယ်လိုထင်လဲ?
ဒါလေးက ခေတ်ဆန်ပြီး အိနြေ္ဒရတဲ့ အဆင်လေးနော်။ ဒီလိုပုံစံလေးဆိုရင် ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညစာစားပွဲတွေ တက်မယ်ဆို အမိုက်ပေါ့…
ဒါမျိုးဒီဇိုင်းလေးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်စားထွက်တာ၊ ဈေးဝယ်ထွက်တာတို့မှာ ဝတ်မယ်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိစေသလို အဆင်တန်ဆာတွေမလိုဘဲ ရိုးရိုးလေးနဲ့ လန်းနေစေမှာလေ…
ဒီလို Jumpsuit လေးဆို အခုလိုနွေရာသီမှာ အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ အဆင်လေးရော အသားလေးကပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေလို့ နွေရာသီဖက်ရှင်အတွက် ဒါလေးသာ တွေးထားလိုက်ပါတော့လို့…
ဒါလေးကလည်း ချစ်စရာကောင်းသလို အိနြေ္ဒလည်းရ၊ စမတ်လည်းကျသမို့ လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေ၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ ဝတ်ဆင်လို့ရတယ်လေ။ ပုံထဲကလို အိတ်မိုက်မိုက်လေးတွေနဲ့ဆို လုံးဝပွဲတိုးပြီပေါ့…
အခုဝတ်စုံလေးကတော့ လုံးဝ Sexy ဒီဇိုင်းဖြစ်သလို ခန္ဓာကိုယ်လည်း ရွေးပါတယ်။ အရပ်ရှည်ပြီး ပုခုံးကျယ်၊ လည်တိုင်ကြော့တဲ့ ယောင်းတို့နဲ့ဆို ဆိုး ဆိုး ဟော့တယ် ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
Related Article >>> ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင် (၁၀) မျိုး
ဒီ ဂျင်း Jumpsuit လေးက ကျစ်လျစ်သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ယောင်းတို့နဲ့ ပိုလိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သတိထားစေချင်တာက ဒီလို ဂျင်းထည်လေးဆိုရင်တော့ အမျိုးအစားကောင်းကောင်းဝယ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ယောင်းတို့ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ကောက်ကြောင်းလေးတွေ ပိုလှမှာပေါ့။
ဒီပုံစံတွေကတော့ ပါတီတွေ၊ အခမ်းအနားတွေမှာ အနောက်တိုင်းဆန်ဆန် ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့် ဒီိဇိုင်းလေးတွေပါ။ ကျောဘက်မှာ ပြောင်ဒီဇိုင်း မဟုတ်လည်း ကြက်ခြေခတ်ဒီဇိုင်းတွေမို့ ကျောအလှပေါ်စေပါတယ်။ ပြောမရဘူးလေ.. အခမ်းအနားတစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လန်းနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား 😛
အခုပြခဲ့တဲ့ Jumpsuit လေးတွေက ပုံစံစုံ၊ အမျိုးအစားစုံမို့ ယောင်းတို့ဈေးဝယ်တဲ့အခါ စဉ်းစားဖို့ အထောက်အကူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Jumpsuit လေးတွေနဲ့ လန်းနိုင်ကြပါစေ။
References – Style Craze, India Mart
လနျးသထကျ လနျးခငျြသူတှအေတှကျ …
တဈကွော့ပွနျ ဖကျရှငျတှထေဲမှာ ပြိုမတှေရေဲ့ အသညျးစှဲဖကျရှငျတဈခုကတော့ Jumpsuit လို့ချေါတဲ့ အင်ျကြီနဲ့ ဘောငျးဘီတဈဆကျတညျးပါတဲ့ ဝတျစုံလေးတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီဝတျစုံလေးတှကေ အပျေါနဲ့အောကျ တဈခါတညျးပါပွီးသားဆိုတော့ ဘာနဲ့ ဘယျလို လိုကျဖကျအောငျ ဝတျရမလဲလို့ စိတျပူစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့… ကိုယျဝတျခငျြတဲ့အခြိနျကောကျဝတျလို့ရတာဆိုတော့ အလုပျမရှုပျတော့ဘူးလေ။ အားနညျးခကျြကတော့ တဈခုပဲ။ အိမျသာတကျတဲ့အခါ အကုနျခြှတျခရြတာလေး တဈပေါကျရှိ -_-
အကျဒျမငျက ဒီတဈခါတော့ နောကျဆုံးထှကျ Jumpsuit လှလှလေးတှကေို ယောငျးတို့အတှကျဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုလေးဝတျရငျကောငျးမယျဆိုတာပါ ဖျောပွပေးမှာမို့ ယောငျးတို့ ဈေးဝယျထှကျတဲ့အခါ ခေါငျးမစားတော့ဘူးပေါ့…
ဒီလို Jumpsuit လေးကတော့ သပျသပျရပျရပျနဲ့ စမတျကတြဲ့ ပုံပျေါစပေါတယျ။ သူ့ကိုတော့ အလုပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ ကိစ်စတှေ၊ အစညျးအဝေးတှမှော ဝတျတာ ပိုအဆငျပွလေောကျမှာပါ။ တဈဘကျသားကလညျး ကိုယျ့ကို လေးစားစလေောကျမယျ့ အမွငျဖွဈစပွေီး ကိုယျ့အတှကျလညျး သကျတောငျ့သကျသာရှိတယျလေ.. ခေါငျးလညျး မစားတော့ဘူးပေါ့..
ပုခုံးသားဖျောထားပွီး ခေါငျးလောငျးဘောငျးဘီပုံစံနဲ့တှဲဖကျထားတဲ့ ဒီဝတျစုံလေးဆိုရငျတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လှငျ့လို့ရပါတယျ။ နှရောသီအတှကျ အံကိုကျပေါ့.. အရောငျနုနုလေးဆိုတော့ စိတျကလညျး အရမျးကို လှတျလပျနမှောလေ.. စိတျပြိုကိုယျနုတာပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
ဒီ Jumpsuit လေးကတော့ ဂါဝနျပုံစံလေးမို့အိန်ဒွရေရလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုတှေ ပိုကောငျးစမှောပါကှယျ… Crush နဲ့သှားတှမှေ့ာတို့၊ ခဈြခဈြနဲ့ တူတူသှားစရာရှိတာတို့ဆို ဒါမြိုးလေးနဲ့ ကှကျတိပဲလေ.. အမွငျလညျး တငျ့၊ ဆှဲဆောငျမှုလညျးရှိ.. ဘယျလောကျကောငျးလဲ <3
Related Article >>> နစေ့ဉျ ရုံးတကျဖကျရှငျအတှကျ ခေါငျးစားနရေတဲ့ယောငျးတို့အတှကျ
ဒီလို ပခုံးသားအကမြှာ အဖတျဝဲဝဲလေးပါတဲ့ ဒီဇိုငျးကတော့ တဈကွော့ပွနျဖကျရှငျတဈမြိုးပါပဲ။ ပါတီတှေ နိုကျအောကျတှအေတှကျတော့ ရှယျမိုကျမယျ့ ဒီဇိုငျးလေးပေါ့.. ယောငျးတို့ရော ဘယျလိုထငျလဲ?
ဒါလေးက ခတျေဆနျပွီး အိန်ဒွရေတဲ့ အဆငျလေးနျော။ ဒီလိုပုံစံလေးဆိုရငျ ကိုယျ့မိတျဆှတှေနေဲ့ တှဆေုံ့ပှဲတှေ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ညစာစားပှဲတှေ တကျမယျဆို အမိုကျပေါ့…
ဒါမြိုးဒီဇိုငျးလေးက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မုနျ့စားထှကျတာ၊ ဈေးဝယျထှကျတာတို့မှာ ဝတျမယျဆို အဆငျပွပေါတယျ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိစသေလို အဆငျတနျဆာတှမေလိုဘဲ ရိုးရိုးလေးနဲ့ လနျးနစေမှောလေ…
ဒီလို Jumpsuit လေးဆို အခုလိုနှရောသီမှာ အရမျးကို အဆငျပွစေပေါတယျ။ အဆငျလေးရော အသားလေးကပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖွဈစလေို့ နှရောသီဖကျရှငျအတှကျ ဒါလေးသာ တှေးထားလိုကျပါတော့လို့…
ဒါလေးကလညျး ခဈြစရာကောငျးသလို အိန်ဒွလေညျးရ၊ စမတျလညျးကသြမို့ လူကွီးမိဘဆရာသမားတှေ၊ ဆှမြေိုးမိတျဆှတှေနေဲ့ တှဆေုံ့ပှဲတှမှော ဝတျဆငျလို့ရတယျလေ။ ပုံထဲကလို အိတျမိုကျမိုကျလေးတှနေဲ့ဆို လုံးဝပှဲတိုးပွီပေါ့…
အခုဝတျစုံလေးကတော့ လုံးဝ Sexy ဒီဇိုငျးဖွဈသလို ခန်ဓာကိုယျလညျး ရှေးပါတယျ။ အရပျရှညျပွီး ပုခုံးကယျြ၊ လညျတိုငျကွော့တဲ့ ယောငျးတို့နဲ့ဆို ဆိုး ဆိုး ဟော့တယျ ဖွဈသှားမှာပေါ့။
Related Article >>> ပူပွငျးတဲ့ နှရောသီနဲ့အလိုကျဖကျဆုံးဖွဈတဲ့ ဖကျရှငျ (၁၀) မြိုး
ဒီ ဂငျြး Jumpsuit လေးက ကဈြလဈြသေးသှယျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျပိုငျရှငျယောငျးတို့နဲ့ ပိုလိုကျဖကျမယျလို့ထငျပါတယျ။ သတိထားစခေငျြတာက ဒီလို ဂငျြးထညျလေးဆိုရငျတော့ အမြိုးအစားကောငျးကောငျးဝယျစခေငျြပါတယျ။ ဒါမှလညျး ယောငျးတို့ သကျတောငျ့သကျသာရှိပွီး ကောကျကွောငျးလေးတှေ ပိုလှမှာပေါ့။
ဒီပုံစံတှကေတော့ ပါတီတှေ၊ အခမျးအနားတှမှော အနောကျတိုငျးဆနျဆနျ ဆှဲဆောငျမှုရှိစမေယျ့ ဒီဇိုငျးလေးတှပေါ။ ကြောဘကျမှာ ပွောငျဒီဇိုငျး မဟုတျလညျး ကွကျခွခေတျဒီဇိုငျးတှမေို့ ကြောအလှပျေါစပေါတယျ။ ပွောမရဘူးလေ.. အခမျးအနားတဈခုလုံးမှာ ကိုယျတဈယောကျတညျး လနျးနတောမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ မဟုတျလား 😛
အခုပွခဲ့တဲ့ Jumpsuit လေးတှကေ ပုံစံစုံ၊ အမြိုးအစားစုံမို့ ယောငျးတို့ဈေးဝယျတဲ့အခါ စဉျးစားဖို့ အထောကျအကူဖွဈမယျထငျပါတယျ။ Jumpsuit လေးတှနေဲ့ လနျးနိုငျကွပါစေ။
Tags: attractive, cute, Fashion, How, jumpsuits, place, Smart, Style, Time, wear
Sugar Cane May 18, 2018